I-Opera Reborn ifika, inguqulelo entsha yesikhangeli, ilungele ukudityaniswa kunye nenethiwekhi yoluntu | Ndisuka mac
I-Opera Reborn ilapha, inguqulelo entsha yesikhangeli, ilungele ukudityaniswa kwenethiwekhi
Kubonakala ngathi kutshanje, imakethi yesikhangeli ilawulwa yiGoogle Chrome kunye neApple's Safari. Kangangexesha elithile, eyona nto iphambili eyayifunwa kwisikhangeli yayisantya, silandelwa ngokhuseleko. Ke ingxoxo-mpikiswano ijikeleze ekusetyenzisweni kwezixhobo zeli candelo libalulekileyo kule mihla yethu.
Kodwa kulungile ukuba kukho iyantlukwano. Umahluko ngokwawo kufuneka ukuba ibe sisikhokelo se-Opera ukuba silandele, sinikezela ngesikhangeli esifanelekileyo kuthungelwano lwentlalo. Ukusukela namhlanje siyayazi inguqulelo yayo entsha yesikhangeli, igama layo lilayishwe ngentsingiselo, uzalwe (uzalwe ngokutsha ngesiNgesi) esisicaciso esifanelekileyo senjongo.
Ekuboneni kokuqala, ibonakala njenge ujongano oluhlaziyiweyo kwaye ukubaluleka okunikwe uthungelwano lwasentlalweni. Ukuba ufuna ukwazi ukuba ndithetha ngantoni, ungabukela le vidiyo ilandelayo:
Kwiminyaka yakutshanje, ukudityaniswa kwenethiwekhi yoluntu kwizikhangeli zewebhu kuye kwanda ngokuxhaphakileyo. Nangona kunjalo, ukutshintshela phakathi kweethebhu xa uphendula umyalezo kuye kwanzima kwaye kungasebenzi, kude kube ngoku. Ngomkhangeli omtsha, i-Opera ivumela abasebenzisi ukuba banxibelelane kwisikhangeli ngaphandle kokufaka naziphi na izandiso okanye usetyenziso.
IKrystian Kolondra, onoxanduva lomkhangeli we-Opera ubeke izimvo:
Iinethiwekhi zentlalo zibutshintshe ngokupheleleyo ubomi bethu kwaye zisivumela ukuba sisebenze, sifumane izinto ezintsha kwaye sinxibelelane ngaxeshanye ... Olu tshintsho lufikelele kwii-smartphones, endaweni yedesktops kunye neelaptops, ngezixhobo ezinamandla ngakumbi zokwenza izinto ezininzi. Siyakholelwa ukuba oku kufuneka kuguquke.
Ukuzalwa kwakhona kuza kuthwele iindaba ukwenzela ukuba abasebenzisi badityaniswe ngokupheleleyo ngelixa babrawuza. Izinto ezintsha zibandakanya:
Ukufikelela ngqo kwi Iinguqulelo zewebhu ze: Facebook Messenger, WhatsApp, yocingo. Ngqo kwibar yesikhangeli.
Ukubrawuza ngaxeshanye ngelixa sibonisana kwaye sibhala kwibar esecaleni.
Kukho ukhetho lwe setha incoko.
Ukwabelana ngefoto kulula kakhulu: Khetha nje isahlulo sescreen kwaye ungabelana ngokhetho olo.
Utshintsho phakathi kwenethiwekhi yoluntu ngokukhawuleza, ngenxa yokufikelela ngokuthe ngqo.
Esi sikhangeli ngamava amatsha. Ke ngoko, ukuba uthatha isigqibo sokuyikhuphela, nantsi ifayile unxibelelwano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Opera Reborn ilapha, inguqulelo entsha yesikhangeli, ilungele ukudityaniswa kwenethiwekhi
Isicoci senkqubo kunye neAntivirus, iMac yakho ilungele i-euro enye
IMicrosoft Visual Studio ngoku iyafumaneka kwiMac kwinguqu yayo yokugqibela